I-Vicolo delle Keys House - I-Airbnb
I-Vicolo delle Keys House
Poggibonsi, Toscana, i-Italy
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Natascia
Indlu isendaweni enethezekile nethule enkabeni yomlando yasePoggibonsi, cishe amamitha ayi-100 ukusuka esiteshini sesitimela namabhasi, okukuvumela ukuthi ufinyelele kalula ezindaweni ezidumile zezivakashi eTuscany njengeSiena, Florence, Pisa, San Gimignano, Monteriggioni, Volterra. , Grosseto kodwa futhi Cinque Terre, Bologna, eRoma, eMilan. Izitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, izitolo ngisho nemisebenzi efana ne-"Siena Eye Laser" Ophthalmology Center ingaphakathi kwebanga lokuhamba. Endlini uzothola i-WI-FI kanye ne-air conditioning mahhala.
Ifulethi lesikhathi lisanda kulungiswa ngokucophelela okukhulu, okushiya izici ezijwayelekile zale ndawo yokuhlala eyingqophamlando, njengemishayo yokhuni, izindonga zamatshe, ama-niches, ama-grit floor, izitini eziveziwe. Ukukhanyisa nesimo sezulu kulungiswe ngokuphelele futhi isivakashi singakwazi ukulawula izinga lokushisa ekamelweni ngalinye ngenxa yama-air conditioner amabili azimele kanye nefenisha ye-digital adjustable thermo-furniture endlini yokugezela.
Cishe ubukhulu bamamitha-skwele angama-45, leli fulethi elinamagumbi amabili linekhishi elifakwe umshini wokuwasha izitsha, ihhavini, ifriji, ifriji nombhede osofa ababili. Ikhishi nge lokungeniswa hob kagesi ifakwe izimbiza, amapani, Moka ikhofi umenzi, Cutlery, amapuleti, amanzi izibuko, yewayini, izinkomishi kanye lokunyenti, ngabe tinkomishi, nezitsha, ladles, corkscrews, abanikazi imbiza, trivets, iketela kagesi okokomela amanzi, into yokucocobalisa, udoti izikhwama, izipontshi, insipho yesitsha sesandla, insipho yomshini wokuwasha izitsha, okomshini wokukhipha amafutha olungele ukusetshenziswa endaweni yonke, ijeli yokubulala amagciwane ngesandla, njll. I-LCD TV yedijithali enikeziwe ibonakala kuwo wonke ama-engeli.
Indwangu yetafula ehlanzekile kanye nethawula kunikezwa ngesikhathi sokuhlala ngakunye kanye nobhasikidi othokomele onokukhethwa kokudla okumnandi okupakishiwe, amanzi anganyakazi asemabhodleleni, ikhofi elincibilika emanzini kanye netiye elinokunambitheka okune okuthandayo.
Igumbi elinombhede okabili lingahlonyiswa, uma liceliwe, libe nombhede wezingane (mahhala) noma umbhede owodwa owengeziwe wesivakashi esidala sesihlanu (ngenkokhelo encane). Ekamelweni kukhona nendawo yokubeka amajazi, ikhabethe elikhulu eliqukethe izingubo zokulala nemicamelo eyengeziwe, i-ayina ne-ayina ibhodi, i-drying rack, umshanelo, ifosholo, ibhakede eline-mop, iladi elincane, i-walver evalekayo, i-LCD TV, njll.
Igumbi lokugezela elinefasitela lifakwe ishawa ye-magnum enesiteji sokhuni, i-bidet, ukushisisa okulawulwa ngakunye, isiphakeli sensipho ewuketshezi esetshenziswa ngesandla, iphepha lasendlini yangasese, indawo yokomisa izinwele kagesi enama-diffuser amabili ashintshashintshayo, umgqomo omncane ozinikele wemfucuza.
Ukuze ukuhlala ngamunye amashidi futhi pillowcases anikezwa futhi isivakashi ngasinye 3-ucezu ithawula ikhithi (bidet, izandla kanye eshaweni ithawula), kanye nekamelo lokugezela ngezilokotho ikhithi ehlanganisa eshaweni-imoto insipho, insipho obuseduze, eshaweni cap futhi umata. Insoles ukuze uthole ephuma eshaweni.
4.69 · 35 okushiwo abanye
Ukusuka efulethini laseVicolo delle Chiavi ungahamba uye eCassero, inqaba yakudala yeMedici yasePoggio Bonizio, iBasilica yaseSan Lucchese (umgcini wedolobha) kanye neCastle of Badia, Castle of Strozzavolpe, Castello della Magione (Isonto yeThempeli). Maphakathi nendawo (ngaphandle kokuthatha imoto) uzothola izitolo ezinkulu, izitolo, amakhemisi, izindawo zokudlela kanye nezindawo zobumnandi ezilungele labo abahamba ngemoto kodwa nangezithuthi zomphakathi. Futhi kulula kulabo abadinga ukufinyelela emtholampilo onguchwepheshe "Siena Eye Laser" Ophthalmology Center eqhele ngamamitha angama-300 ngezinyawo.
Ungashayela, uthumele imilayezo noma i-imeyili. Siphinde sibe nekhasi le-Facebook kanye newebhusayithi ye-Guesthousetuscany
Hlola ezinye izinketho ezise- Poggibonsi namaphethelo